Abavelisi beeMveliso | China Products Suppliers & Factory
Ubungcali ekuveliseni iminatha echasene nezilwanyana enokwenziwa ngokwezifiso ukuthintela izilwanyana kunye nezilo
Le mveliso inokuthintela ngokufanelekileyo izilwanyana zasendle ekuhlaseleni izityalo. Ingasetyenziselwa ukujikeleza izityalo kunye namabhoma kwiindawo ezisezintabeni okanye kwiindawo zokulondoloza indalo apho izilwanyana zasendle zihlaselwa khona. Ikhusela izilwanyana zasendle ekuhlaseleni izityalo nemithi yeziqhamo. Inokukhusela ukhuseleko lwabantu kunye nezilwanyana kwaye ithintele iintaka ekuhlaseleni izityalo.
Umvelisi ochwephesha weminatha echasene nesichotho ekumgangatho ophezulu
Umnatha ochasene nesichotho luhlobo lwelaphu le-mesh elenziwe nge-polyethylene enokuchasana nokuguga, i-anti-ultraviolet kunye nezinye izongezo zemichiza njengeyona nto iphambili ekrwada.
Umenzi wesikrini sesinambuzane esikumgangatho ophezulu
Umnatha wezinambuzane luhlobo lwelaphu lemesh elenziwe ngepolyethylene eline-anti-aging, anti-ultraviolet kunye nezinye izongezo zekhemikhali njengeyona nto iphambili ekrwada. Inamandla aphezulu okuqina, ukumelana nobushushu, ukuxhathisa kwamanzi, ukuxhathisa ukubola, ukuguga, kwaye akukho Inetyhefu kwaye ayinancasa, kwaye inkunkuma kulula ukuyiphatha. Inokuthintela izitshabalalisi eziqhelekileyo ezifana neempukane kunye neengcongconi.
Ubungcali ekuveliseni iminatha yomoya ekumgangatho ophezulu ukumelana nezaqhwithi ezinamandla
Umbala wale mveliso ubukhulu becala umhlophe kunye nohlaza okwesibhakabhaka, kwaye ubude nobubanzi bemveliso bunokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno ezithile zabathengi. Ubunzima bomnatha bungama-70g-100g/㎡.
Anti-bird net edge abavelisi ihoseyile
Ubunzulu buphindwe kabini kunet eqhelekileyo ye-PE anti-bird net, eyenziwe nge8000d intambo enye.
Umenzi wemithi yeziqhamo ekumgangatho ophezulu kunye nenethi zokuzalisa iintaka
Ubukhulu buphindwe kabini kunobuxhakaxhaka be-PE obuchasene nentaka, eyenziwe nge-8000d intambo enye; Imibala yenetha yile: i-orenji, ibhlowu, eluhlaza, emnyama namhlophe.
Abavelisi bathengisa ngenethi ezilumkiso ezikumgangatho ophezulu ukuthintela ukuwa kwezinto zokwakha
Ubuchwephesha kwimveliso yabenzi bomnatha bokulima iintyatyambo
Umnatha wokulima luhlobo lwemathiriyeli efana nelaphu elukwe yi-UV-resistant PP (polypropylene) ucingo olusicaba. Ngokombala wayo, inokwahlulwa ibe ngumnyama nomhlophe. Ngokwendawo yokusetyenziswa kwayo, inokwahlulwa ibe ziindidi ezimbini: ukusetyenziswa kwangaphakathi kunye nokusetyenziswa kwangaphandle.
Umenzi wenetha womthunzi ophezulu uthintela ukukhanya kunye nokushisa okuphezulu
Iinethi zokufihla iithunzi, ezikwaziwa njengeminatha yomthunzi, lolona hlobo lutsha lwezixhobo ezikhethekileyo zokugquma kwezolimo, ukuloba, ukufuya izilwanyana, isithinteli somoya, kunye nokugquma komhlaba ezithe zakhuthazwa kule minyaka ili-10 idlulileyo. Emva kokugqunywa ehlotyeni, idlala indima yokuthintela ukukhanya, imvula, i-moisturizing kunye nokupholisa.
Le mveliso inokuthintela ngempumelelo iintaka ekuhlaseleni izityalo.
Kwakhona kunokuthintela izinja zasendle kunye neekati zasendle ekungeneni nasekuphumeni ukuqinisekisa ukukhula okunempilo kwezityalo.
Le mveliso inefuthe elihle lokulwa neentaka, ukufakwa lula kunye nokuthunyelwa lula.